Guddiga doorashada maamulka Galmudug oo jawaab ka bixiyay dalabkii ra’iisul wasaare Kheyre – Bulshoweyn Online | Your Source Of News And Entertainment
Guddiga doorashada maamulka Galmudug oo jawaab ka bixiyay dalabkii ra’iisul wasaare Kheyre
Guddiga doorashada xilka madaxweynaha maamulka Galmudug ayaa si rasmi ah u shaaciyay in 28-ka bishaan aynu ku jirno la qaban doonno doorashada xilka madaxweynaha maamulkaasi, kadib markii uu dhawaan xilkaasi iska casilay C/kariin Xuseen Guuleed.
Ra’iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya Xasan Cali Kheyre ayaa maalintii shalay xildhibaanada baarlamaanka Galmudug ugu baaqay in muddo 45 maalmood ah ay dib u dhigaan doorashada madaxweynaha maamulka Galmudug.
Xildhibaan Maxamed Xasan Geelle oo ka mid ah guddiga doorashada Galmudug oo la hadlay warbaahinta gudaha ayaa shaaca ka qaaday in 28-ka bishaan ay qaban doonaan doorashada islamarkaasna aysan jiri doonin in waqti kale dib loo dhigo doorashadaas.
Sidoo kale, xildhibaanka Maxamed Xasan Geelle ayaa sheegay in qabashada araajida musharaxiinta doonaya inay u tartamaan xilka madaxweynaha maamulka Galmudug ay ku eg-tahay 25-ka bishaan, haddana ay dardar u socoto qaban qaabada doorashadaasi loogu diyaar garoobayo.
Dhinaca kale, xildhibaan Maxamed Xasan Geelle ayaa sheegay inaysan marnaba dhici doonin in markale ay dib u dhigaan doorashadaasi maadaama aysan jirin sabab dastuuri ah oo qeexaya in doorashada dib loo dhigo.
Illaa iyo haatan lama oga jawaabta uu ra’iisul wasaare Xasan Cali Kheyre ka bixin doonno hadalkaan kasoo yeeray mid ka mid ah guddiga qaban qaabada doorashada madaxweynaha maamulka Galmudug, xilli maalintii shalay uu ra’iisul wasaaraha baaq kasoo saaray doorashadaasi in dib loo dhigo muddo 45 maalmood ah.